Wararka - Polymers-ka waxay ka hortagaan ceeryaamo halis u ah inta lagu jiro booqashada dhakhtarka ilkaha
Inta lagu jiro aafada, dhibaatada dhibcaha candhuufta ee aerosolized ee xafiiska dhakhtarka ilkaha waa mid daran
Warqad toddobaadkan lagu daabacay Physics of Fluids, oo ay daabacday AIP Publishing, Alexander Yarin iyo asxaabtiisuba waxay ogaadeen in xoogagga qalab birqaya ama daloolinta dhakhtarka ilkaha aysan u dhigmayn astaamaha viscoelastic ee polymer-ka heerka cuntada, sida polyacrylic acid, taas oo waxay u isticmaali jireen sidii shay yar oo loogu shubo meelaha ilkaha.
Natiijooyinkooduna waxay ahaayeen kuwo lala yaabo. Kaliya maahan in shay yar oo polymer ah uu gebi ahaanba baabi'iyo aerosolization, laakiin wuxuu ku sameeyay si fudud, isagoo soo bandhigaya fiisikiska aasaasiga ah ee polymerka, sida kala-wareejinta isku-fidinta, oo ujeedo ujeedkii loogu talagalay si qurux badan u qabtay.
Waxay tijaabiyeen laba polymer oo ay ansixisay FDA. Polyacrylic acid wuxuu cadeeyay inuu ka waxtar badan yahay xanthan xanjada, maxaa yeelay marka lagu daro naftiisa dheeriga ah ee dheereeya (culeyska laastikada sare leh ee fidinta), wuxuu muujiyay culeys yar oo xiiq ah, taas oo kadhigaysa bambooyin fudud.
"Waxa layaabka lahaa ayaa ah in tijaabadii ugu horreysay ee shaybaarkay ay gabi ahaanba caddeysay fikradda," ayay tiri Yarin. “Waxay ahayd wax layaableh in qalabkani awood u lahaa inuu si fudud oo gebi ahaanba u xakameeyo aerosolization-ka qalabka ilkaha, oo ay ku jiraan xoogag firfircoon oo firfircoon. Si kastaba ha noqotee, xoogagga jilicsanaanta ee ay soo saaraan waxyaabo yaryar oo polymer ah ayaa ka xoog badnaa. ”
Daraasaddooda waxay diiwaangelisay qarxiska rabshadaha leh ee jeebadaha biyaha ee la siinayo ilkaha iyo cirridka ee aaladda ilkaha aeroosolizes. Ceega buufinta ee la socota booqashada dhakhtarka ilkaha ayaa ah natiijada biyaha oo la kulma gariir deg deg ah oo qalab ama xoogagga daloolinta ee daloolinta, taas oo biyaha u daadisa dhibco yaryar oo soo jiida kuwaas.
Isku-darka polymer-ka, markii loo isticmaalay waraabinta, wuxuu xakameeyaa dilaaca; taa bedelkeeda, polymer macromolecules-ka oo u kala baxa sida xargaha caagga ayaa xaddida aerosolization-ka biyaha. Marka caarada qalab gariir ama daloolinta ilkaha ay ku dhex dhacdo xalka polymer, xalka wuxuu ku xiraa silsilado snakelike ah, oo gadaal loo jiido dhinaca caarada aaladda, iyadoo la beddelayo dhaqdhaqaaqa caadiga ah ee lagu arko biyaha saafiga ah ee ilkaha.
“Marka dhibco ay isku dayaan inay ka baxaan jirka dareeraha ah, dabada dhibcaha waa la kala bixiyaa. Taasi waa halka ay ka ciyaarayaan xoogagga laastikada ee muhiimka ah ee la xidhiidha kala-soocidda isku-xidhka ee polymer macromolecules, ”ayuu yidhi Yarin. "Waxay xakameynayaan dheecaanka dhererka waxayna dib u soo celinayaan dhibcaha, iyagoo gebi ahaanba ka hortagaya aerosolization."
Qalabka ay bixiso machadka American Physics. Fiiro gaar ah: Mawduuca waxaa loo habeyn karaa qaabka iyo dhererka